Q1: Iyini imikhiqizo yakho eyinhloko kanye nokunikezwa kwezinto ezibonakalayo?
A: Imikhiqizo yethu eyinhloko Izingxenye ze-CNC Machining ezinembile kakhulu (Insimbi Ye-Carbon, Insimbi Yengxubevange, Ingxubevange ye-Aluminium, Insimbi Engagqwali, Ithusi, Ithusi, ingxubevange ye-Titanium nanoma yiziphi ezinye Izingxenye Zenziwe Ngokwezifiso), Izingxenye Zensimbi Yeshidi, Izingxenye Zokunyathela, kanye Nezingxenye Zokubumba Umjovo.
Q2: Ingabe unomthamo owanele?
A: Imishini yethu yokukhiqiza inekhwalithi ephezulu.Sineqembu labasebenzi abanamakhono asebesebenze iminyaka engaphezu kweyi-10.Okuhlangenwe nakho kwabo kokukhiqiza nobuchwepheshe kucebile kakhulu futhi kunamakhono.Sinemali eyanele yokuqinisekisa ukusebenza okuvamile kwemboni.
Q3: Hlobo luni Lwesevisi ozohlinzeka ngalo?
A: Inhloso Yangempela Yenkampani Yethu UKUXAZULULA ZONKE IZINKINGA zawo wonke Amakhasimende ethu.Ngakho-ke, noma ngabe asikwazanga ukuhlangabezana nezinye izimfuneko zakho, sizoxhumana nezimboni zethu zokubambisana, ezinekhono lokufeza izidingo zakho, ngentengo efanelekile kanye nekhwalithi ephezulu.
Q4: Ngingayithola nini intengo?Ngingathola isaphulelo?
A1: Ngokuvamile, sikunikeza ikhotheshini esemthethweni phakathi namahora angama-24, futhi umnikelo okhethekile owenziwe ngezifiso noma oklanyelwe awudluli amahora angama-72.Noma yimaphi amacala aphuthumayo, sicela usithinte ngokuqondile ngocingo noma usithumelele i-imeyili.
I-A2: Yebo, nge-oda lokukhiqiza ngobuningi, kanye namakhasimende avamile, ngokuvamile, sinikeza isaphulelo esinengqondo.
I-Q5: Yini okufanele uyenze uma kwenzeka izimpahla ezilimele ngesikhathi sokuthutha?
IMP: Ukuze ugweme noma iyiphi inkinga elandelayo mayelana nenkinga yekhwalithi, siphakamisa ukuthi uhlole izimpahla uma usuzitholile.Uma kukhona inkinga yezokuthutha eyonakele noma yekhwalithi, sicela uthathe imininingwane yezithombe bese usithinta ngokushesha ngangokunokwenzeka, sizoyiphatha kahle ukuze siqinisekise ukuthi ukulahlekelwa kwakho kuncipha kube kuncane kakhulu.
Q6: Ngingakwazi ukwengeza Ilogo yami Emikhiqizweni?
A: Yebo, Ngezingxenye Zomshini, singasebenzisa i-Laser Cutting noma i-Engraving ukuze sibeke I-Logo yakho kuyo;Ngezingxenye Zeshidi Lensimbi, Izingxenye Zokubamba Nezingxenye Zepulasitiki, sicela usithumele Ilogo futhi sizokwenza iMold ngayo.
Q7: Kungenzeka yini ukwazi ukuthi imikhiqizo yami iqhubeka kanjani ngaphandle kokuya efektri yakho?
IMP: Sizohlinzeka ngoHlelo Lokukhiqiza oluningiliziwe futhi sithumele Umbiko Wamaviki Onke onezithombe, okubonisa izinqubo zokukhiqiza ezinemininingwane.Okwamanje, sizohlinzeka ngombiko we-QC walo lonke uhlobo Lwemikhiqizo ngaphambi Kokulethwa.
Q8: Uma wenza imikhiqizo esezingeni eliphansi, ungasibuyisela imali?
IMP: Empeleni, ngeke sithathe ithuba lokwenza imikhiqizo yekhwalithi ephansi.Ngokujwayelekile, sizokhiqiza imikhiqizo yekhwalithi enhle kuze kube yilapho uthola ukwaneliseka kwakho.
Izingxenye Zensimbi Zeshidi Eliphezulu Ezenziwe Ngokwezifiso, Cnc Titanium Machining, Custom Machining, Ukwenza imishini, Precision Machining, Precision Machining Izingxenye,